Ihe nzacha carbon: Ekwesịrị m iji otu n'ime ime ụlọ eto m?- KCvents sistemu ikuku
Ya mere, ị dechara ụlọ ị na-eto eto, ị malitela ịkọ ihe ọkụkụ.Ị naghị achọpụta ya na mbụ, mana n'ikpeazụ ị ga-achọpụta na mpaghara gị na-eto eto nwere ezigbo agwa.
Ma ọ bụ isi ike nke osisi gị ma ọ bụ ntakịrị ihe funk site na iru mmiri, ohere ị ga-achọ idobe isi nke ụlọ ị na-eto eto n'onwe gị.Ọ bụrụ na ịchọrọ idobe ọrụ gị nke ọma, ma ọ bụ na ịchọrọ ịhapụ ísì sitere na mpaghara gị na-eto eto n'ụlọ gị, ị kwesịrị ịtụle iji carbon filter n'ime ụlọ gị na-eto eto.
Kedu ka ihe nzacha carbon si arụ ọrụ
Ọ dị nnọọ mfe: KCHYRO Ihe nzacha carbon na-arụ ọrụ site na ọnyà isi na-achọghị (ụmụ irighiri ihe na-esi ísì ụtọ) na ụmụ irighiri uzuzu iji mee ka ikuku dị ọhụrụ na-enweghị isi nyocha n'ime tube.
Enwere ihe dị iche iche ihe nzacha carbon na-eji, mana ọtụtụ - gụnyere ihe nzacha carbon KCHYDRO - na-eji Australia unyi .Ọ bụ ihe nwere oghere ma baa uru maka ọtụtụ ihe - site na ikpochapụ ụfọdụ gas na ikuku ruo iji ya mee ihe mkpuchi ihu.
Carbon na-arụ ọrụ nwere nnukwu mbara elu nwere ọtụtụ narị pores.Oghere ndị a nwere ike ijide ụmụ irighiri ihe site na ikuku site na usoro a maara dị ka adsorption. Usoro a na-enye ohere ụmụ irighiri ihe dị ka uzuzu, unyi, na ihe na-esi ísì ụtọ ịrapara na carbon, na-egbochi ha ịlaghachi azụ n'ikuku kpamkpam.
N'ezie, ikuku abụghị naanị na-ese n'elu carbon ka a na-enyocha ya. Ị na-amanye ụmụ irighiri ihe na-esi ísì ụtọ si n'ọnụ ụlọ gị na-eto eto ka ha rapara na carbon na-arụ ọrụ n'ime ihe nzacha carbon gị nwere ihe na-ekpocha ọkụ.Onye ofufe ahụ na-adọkpụrụ ikuku niile dị n'ime ụlọ gị na-eto eto wee kwaba ya na nzacha, na-echekwa uzuzu na mkpụrụ ndụ isi ka ọ ghara ịgbanarị ma gbasaa ísì n'èzí ụlọ gị na-eto eto ma ọ bụ na-eto eto ụlọikwuu.
Iji ihe nzacha carbon n'ime mpaghara na-eto eto
Mgbe oge ruru ịmalite iji nzacha carbon na mpaghara gị na-eto eto, enwere usoro ụfọdụ dị mkpa ị kwesịrị iburu n'uche.
Chọta nha nke ọma
Emeghị ka ihe nzacha carbon niile hà nhata.Dabere na size nke gị na-eto eto na nke uru cubic ụkwụ kwa nkeji (CFM) nke ndị na-ekpochapụ gị , enwere ihe nzacha ikuku carbon dị iche iche ga-adabara gị mma.
Iji chọpụta uru CFM, ị ga-agbaso usoro ndị a:
Tụlee ịdị elu, obosara, na ogologo nke ụlọ gị na-eto eto ma ọ bụ tolite tent.
Gbanwee nọmba ndị a ka ị gbakọọ eserese cubic nke oghere ị ga-eji.
Mụbaa nọmba a site na ọnụego mgbanwe (ọnụọgụ oge ịchọrọ ka a gbanwee ikuku kpamkpam kwa elekere).Iji nweta ikuku dị ọhụrụ mgbe niile, ị ga-achọ ịbawanye site na 60, nke bụ otu ugboro kwa nkeji.
CFM gị bụ ọnụọgụgụ a kewara site na 60.
Ụzọ kacha mma ị ga-esi chọpụta nha nha carbon grow room filter bụ iji hụ na uru CFM nke nzacha gị bụ ma. hà nhata ma ọ bụ dị ala karịa uru CFM nke ọnụ ụlọ gị na-eto eto na onye na-agwụ ike gị.
Dịka ọmụmaatụ, sị na ị nwere tent tolite 5ft x 5ft x 8ft:
mụbaa 5x5x8 .Ị nweta 200 , nke bu cubic ụkwụ nke oghere gị na-eto eto.
Mmụba nke cubic ụkwụ (200) site na ọnụ ọgụgụ nke mgbanwe kwa elekere (60) , nke na-enye gị 12000 .
Kewaa nọmba ahụ (12000) site na nkeji mgbanwe n'ime otu elekere (60) maka ngụkọta nke 200 CFM .
Were ya 200 CFM ị nwere wee chọọ nzacha na na-ezute ma ọ bụ karịa nke CFM.
Ọchịchị isi: Ọ na-aka mma mgbe niile ịgafe ihe CFM gị chọrọ karịa n'okpuru.Ọ bụrụ na ịnweta nzacha dị nta karịa ka ị ga-achọ, ị ga-eji carbon ahụ ngwa ngwa.
Hazie nzacha gị
Ozugbo ị mara nke nha nzacha ị chọrọ, ị ga-ahụ mkpa ka ị hụ na ị hazie ya nke ọma .Ka ị wee nwee ike nweta ihe nzacha ikuku carbon gị, ịkwesịrị ijide n'aka na ọ na-enyocha ikuku niile dị n'ime ụlọ gị.
Nke a pụtara na ịkwesịrị ijikọ ya na onye na-akwado ụlọ na-eto eto wee jikọọ ducting na ya, wee mechie ya nke ọma site na iji duct clamps.
Debe fan na iyo n'elu ma ọ bụ nso gị osisi .Na-esote, dobe onye ofufe ka ọ dọpụta ikuku n'ime ụlọ gị na-eto eto wee gwụ ya na nzacha.Nhazi a ga-agba mbọ hụ na ụmụ irighiri ihe niile dị n'ikuku ga-agafe na nzacha carbon gị tupu ikuku ọ bụla ahapụ ụlọ gị.
Jikwaa ihe nzacha carbon gị
Mgbe oghere niile, ma ọ bụ saịtị mgbasa ozi, dị na carbon jupụtara, nzacha carbon gị agaghịzi enwe ike ijide ụmụ irighiri ihe ọhụrụ.Ị nwere ike idowe ihe nzacha carbon gị site n'ịhụ na ị na-ehicha ya mgbe niile - na-emekarị otu ugboro n'ọnwa .
Iji hichaa nzacha gị, ị ga-ewepụ ihe nzacha n'ime ụlọ ị na-eto eto, wee kpochapụ uzuzu na irighiri ihe ọ bụla tọrọ atọ.
Rịba ama: N'adịghị ka nkwenkwe ndị a ma ama, iji mmiri na ncha na-ehicha unyi n'ime nzacha nwere ike inwe mmetụta dị njọ.Cheta na unyi na-agbaji, site n'enyemaka nke mmiri, ị nwere ike ime ka mbuze ahụ dị ngwa.
N'ikpeazụ, carbon filter gị ga-eru ebe ọ na-agaghị enwe ike ọnyà dị ka ọ na-emebu.Dabere n'ọrụ a na-amanye ya ịrụ. Ekwesịrị ịgbanwe ihe nzacha ikuku carbon ọ bụla otu na otu na ọkara afọ .Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ịmalite ịhụ isi ísì siri ike ọbụna mgbe ị sachara nzacha n'ụlọ, ohere ọ bụ oge maka mgbanwe.
Kwesịrị iji ihe nzacha carbon n'ebe ị na-eto eto?
ọ zara ajụjụ ahụ bụ ee!
Ihe nzacha carbon nke KCHYDRO bụ nhọrọ kacha mma maka idebe ísì site na mpaghara gị na-eto eto n'ụlọ gị na n'ebe ndị agbata obi gị nọ.Nke kachasị mkpa, ha bụ ụzọ kachasị mma iji hụ na ọbụna ikuku kacha ọhụrụ na-eji osisi gị na-eto eto.
Ọ dị mma ịmara na e nwere ihe ngwọta ndị ọzọ dị mkpụmkpụ ị nwere ike iji, dịka ikuku purifiers ma ọ bụ neutralizing sprays na powders .Nke ahụ kwuru, ngwaọrụ ndị a anaghị ewepụcha isi na ọrụ gị na-eto eto, na ha agaghị ekpochapụ kpamkpam uzuzu ọ bụla na-esi n'ime ụlọ gị na-eto eto.Ọbụna nke ka njọ, ọtụtụ oge, sprays na gels nke na-anwa ikpochapụ ikuku na-emerụ ahụ terpenes na mkpụrụ ndụ ụtọ nke osisi.
Ụzọ kacha mma ị ga-esi kwenye na ọnụ ụlọ gị na-eto eto enweghị isi na-enweghị isi ma mee ka ísì ghara ịgbanarị ebe ị na-eto eto bụ iji ihe nzacha carbon.
Ị nwere ike ịmalite site na ịchọta ihe nzacha kwesịrị ekwesị maka ọnụ ụlọ gị na-eto eto site na www.kcvents.com !
Jenụwarị 21, 2022